Home Wararka Qaraxii maanta oo gaystay dhimasho iyo dhawac
Qaraxii maanta oo gaystay dhimasho iyo dhawac
Qaraxii labaad ayaa goordhow laga maqlay dhamaan qaybaha kala duwan ee magaalada Muqadishu. Qaraxa oo ka dhacay meel aan ka fogayn Galaha Murtida iyo Madadaalada ee Tiyaatarka ayaa la shagayaa in ku dhinteen dad isugu jira shacab iyo askar.
Ma aha markii ugu horeeysay ee uu qarax ka dhaco meel ku dhaw Villa Soomaaliya. Qaraxyadan ayaa ku soo adaya iyada oo ay dalka ka jiraan qalqal siyaaasadeed.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Dil naxdin leh oo ka dhacay Muqdisho
Next articleQarax labaad oo ka dhacay Muqdisho iyo Xaalada oo kacsan
Wararkii ugu dambeeyay Qarax dad ku dhinteen oo ka dhacay Abu...
War Deg Deg ah: MW Farmajo oo Caawa Saxeexaya la soo...